MACLUUMAADKA MUUQAALKA EEYAHA EE PAKISTANI MASTIFF IYO SAWIRRO - EEYAHA
Karat the Bully Kutta oo 4 jir ah— 'Kani waa Pakistani Bully Kutta ah oo nadiif ah oo aan Pakistaan ​​u aaday si aan ugu soo celiyo Waqooyiga Ameerika. My Bully Kuttas waa tijaabooyinka tayada ugu fiican. '
Waxaa jira noocyo kala duwan oo Bully Kutta ah min gobol ilaa gobol. Noocyada caanka ah qaarkood waa:
Nooca Qadiimiga ah Bully Kutta
Nooca Mastiff Bully Kutta
Kutta Bully casriga ah
Maqaarka Rabbigu waa dabacsan yahay oo dhuuban yahay laakiin adag yahay. Tani waa astaamo caan ah oo ah nooca. Maqaarka ku wareegsan daanka hoose iyo luqunta ayaa dabacsan. Waxay leeyihiin gaas qoto dheer. Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan waa lafaha muruqyada oo aad u muruq badan. Waxay leeyihiin daamanno ballaadhan oo ballaadhan. Dhabarka ayaa dheer oo leh dabada oo ujeeda meel ganaaxan. Socodkoodu wuxuu u eg yahay kan libaaxa. Pakistani Bully Kutta waxay leedahay jaakad gaaban, siman oo inta badan midabkeedu caddaan yahay, sikastaba ha noqotee fawn, madow iyo harlequin ayaa sidoo kale la helaa.
Kani waa Mastiff awood badan. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Beast ka East.' Waa nooc caqli badan oo sharaf leh. Tani waa eey aad u awood badan waxaana kaliya lagula talinayaa milkiilayaasha eyda khibrada leh. Way adkaan karaan in la maareeyo haddii lagu meeleeyo milkiilaha qaldan. Pakistani Bully Kuttas waa dad aad u tababaran. Waa kuwo daacad u ah oo ilaaliya sayidkooda iyo hantidooda. Iyadoo jimicsi habboon , hoggaanka , is dhexgalka bulshada iyo tababarka , Pakistani Bully Kutta waxay u sameyn kartaa wehel la aqbali karo milkiilayaasha mas'uulka ah iyo aqoonta leh. Si fiican u koray Bully Kuttas waxay ku fiican yihiin carruurta, aad u jecel oo ciyaar badan. Dalkooda hooyo inta badan waxaa loo adeegsadaa ilaalin iyo ujeedo ilaalin, laakiin mararka qaar nasiib daro waxaa loo adeegsadaa dagaalka eeyga, waxaana loo sara kiciyaa inay u dagaallamaan eeyaha kale, kana fogaadaan, u dulqaadan karin shisheeyaha. Mastiffkani ma dhagaysan doono haddii uu dareemo inuu ka maskax adag yahay milkiilihiisa. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay lahaadaan a hawo dabiici ah oo awood u leh dabeecadooda . Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah in la gaaro xaalada hogaamiyaha . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhami waxay lashaqeysaa hal khadadka hoggaamiyeyaasha si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah a eygu wuu wargaliyaa xanaaqiisa ku saabsan cabaadka iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY uga sarreeyaan si ka sareysa eyga. Dadku waa inuu noqdaa kuwa go'aamada gaara, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee adiga xiriirka eygaaga waxay noqon kartaa guul dhameystiran. Markay milkiilayaashu si cad u caddeeyaan inay alfa ka weyn yihiin eeyga si deggan, laakiin aad u adag, oo eygu si fiican u jimicsiyo, u tababaran yahay una dhexeeyo bulshada waxay noqon karaan saaxiibbo qoys oo aad u wanaagsan.
Dhererka: 32 - 40 inji (81 - 101 cm) (inyar kayar dumarka)
Miisaanka: 150 - 170 rodol (68 - 77 kg) Eeyaha qaarkood waxay ka badan karaan 200 rodol. Hal eey ayaa la ogyahay inuu koray ilaa 230 rodol.
Noocani wuxuu sida ugu fiican ku qaban doonaa meel badan oo ay kula kulmi karaan caqabado maalinle ah. Si kastaba ha noqotee, jimicsi ku filan waxay la qabsan karaan nooc kasta oo jawi ah.
Bully Kuttas waxay u baahan tahay in la qaato socod maalinle ah si loo qanciyo dareenkooda tahriibka . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaasha qofka haya hogaaminta, sida maskaxda eeyga hogaamiyaha hogaamiya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha.
Qiyaastii 8 ilaa 10 sano.
eyga tan leh wajiga madow
Waxaa jira aragtiyo badan oo ku saabsan asalka noocyadan. Marka loo eego aragtida ugu macquulsan waxaa horey u jirey nooc Mastiff ah oo ka jira qaarad-hoosaadka Indo-Pakistan oo loo isticmaali jirey ugaarsiga, ilaalinta iyo ujeedooyin kale oo badan. Markii Ingiriisku qabsaday qaaradda hoose ee Indo-Pakistan, askarta Ingiriiska waxay keeneen eeyahooda nooca Mastiff, Bull Terriers iyo noocyo kale oo ay la socdaan. Eeyadan waxaa lala tallaabay isirka deegaanka. Taasina waa sababta ay u jiraan noocyo kala duwan oo Bully Kuttas (Pakistani Mastiffs). Waxaa jira aragti ah in noocani uu asal ahaan ka soo jeedo dhulka lama degaanka ah ee Sindh. Taasi waa sababta loo yaqaan 'Sindh Mastiff.' Waxay yihiin a Molosser nooca eyga ka imaado Pakistan waxaana badanaa laga helaa gobolkaas. Ereyga 'Bully' wuxuu ka yimid erayga asalka u ah Punjabi (waa luqad ay ku hadlaan dadka degan Gobolka taariikhiga ah ee Punjab ee Pakistan) 'Bohli' oo loogu dhawaaqo 'Boo-Lee' oo macnaheedu yahay 'duuduub weyn.' Kuttaana waa eray kuhadla Punjabi ama luqad Urdu ah oo macnaheedu yahay 'eey'. Sidaa darteed, Bully Kutta macnaheedu waa 'eey aad u duuban.'
Boozer the Bully Kutta eey yar oo jirta 4 bilood oo ka timid Hindiya— 'Boozer waa eey xarig ah'.
Daalim Bully Kutta oo 3 jir ah— 'Kani waa Pakistani Bully Kutta ah oo nadiif ah oo aan Pakistaan ​​u aaday si aan ugu soo celiyo Waqooyiga Ameerika. My Bully Kuttas waa tijaabooyinka tayada ugu fiican. '
Haramcad Pakistani Mastiff ka Lahore, Punjab Pakistan
Taranka: Pakistani Bully Kutta Pakistani Mastiff)
Dhererka: 32 inji qiyaastii
Milkiilaha: Chauhdry Sultan Chattha.
'Billo oo ah (dhadig) jirta 2 sano jir oo leh lo'. Iyadu waa Mamu (Adeerkay) PBK. Iyadu waa mid aad iyo aad u jecel oo qurux badan. Waxay leedahay dherer iyo miisaan wanaagsan. Tusaale aad ufiican oo Pakistani ah Bully Kutta. Waxa ugu fiican ayaa ah inay jeceshahay inay ciyaarto oo ay jeceshahay qof walba, laakiin isla markaasna waa mid aad iyo aad u feejigan oo ilaalinaysa. Aad bay u addeecsan tahay. Eygeedu wuxuu noqon doonaa midkeygii ugu horreeyay Bully Kutta INSHALLAH. '
(haween) deggan Pakistan. Waxay tahay 2 sano jir. Magaceedu waa Billo.
'Billo (haweeneyda) oo jirta 2 sano oo leh lo'
'Billo (haweeneyda), jirta 2 sano, waxay ku nooshahay Pakistan'
Sawirada Pakistani Mastiff 1
sawirka digaaga jiir
boston terrier chihuahua eeyo isku dhafan oo iib ah
celceliska miisaanka weste
Waa maxay nooca eey yihiin clifford eeyga weyn ee cas